Mankalaza ny faha 23 taonany - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Natomboka tamin’ny alalan’ny Soratra Masina tao amin’ny Ekar Sahambavy,distrikan’i Fandrandava tamin’ny Alahady 31 Janoary 2021 teo ity ny faha 23 taona’ny Radio Tsiry. Nitarika ny Sorona Masina i Mompera Rakotoson Jean Pierre M.A.L. (Ramala), talen’ny onjam-peo, niaraka tamin’i Mompera Léon,mpiandraikitra ny fiadidiana Sahambavy. « Ny kristianina dia Israely vaovao, miombona mihoby an’Andriamanitra, natao hihaino ny tenin’Andriamanitra ihany koa ». hoy i Mompera talen’ny radio nandritry ny toriteniny. Antompisian’ny radio ity ny : fampielezam-pinoana, ny fampandrosoana ny maha olona (ara-kolontsaina, ara-toekarena, sns), fialam-boly, fa indrindra indrindra ny fiarovana ny tontolo iainana simba tanteraka ankehitriny. Fanirian’ny olona mamelona ny Radio Tsiry dia ny hihatsaran’ny fari-piainan’ny olona rehetra mihaino azy.
Ny dingana nolalovany:
Ny mari-drefy 105.0 Mhz no ahenoana azy. Tamin’ny taona 1995, fony i Mgr Randriambololona Philibert,sj, no nikasana hanorenana ity onjam-peo ity araka ny notakian’ny fampielezam-pinoana nambaran’ny konsily faharoa tao Vatikana. Tamin’ny 24 Desambra 1997 (Radio Bemiray no niantsoana azy voalohany) no nanaovana ny andrana voalohany teo Ambozontany (foiben’ny diosezy) ka ora vitsy no nandehanany (02 ora tolakandro hatramin’ny 05 ora hariva). Niato kely ny radio ka rehefa vita ny trano teny Ambatomena (CDS ankehitriny) dia notokanana ny radio tamin’ny 31 Janoary 1998, ary nifindra eny Ambalapaiso tamin’ny 2005 mandraka ankehitriny (12 Marsa 2006 no nitokanana ny trano satria tsizarizary ny teo aloha). Niovaova ny anarana niantsoana ity onjam-peo hatramin’ny taona 1998 io. Ny taona 1998 hatramin’ny 2004 dia « Ra.Dio Fi., izany hoe Radion’ny Diosezin’i Fianarantsoa », hatramin’ny 2006 ary Radio Tsiry mandraka androany izao. Ny teny hoe « Tsiry » dia mifono hevitra vitsivitsy : ara-bakiteny moa dia midika hoe « tsimoka » io teny io, mitondra aim-panahy, fa ankoatr’izay dia tsy tahaka ny hazo na zava-maniry mitsimoka fotsiny izy fa ho tsirim-panantenana ho an’ny olona manoloana ny zava-misy iainana, ka izy koa no ho vavahadin’ny fanantenan’ny olona. Pretra 2 no nitantana azy hatrizay nisiany dia i Mompera Joseph Ignace sy Mompera Ramala.
Rakotra azy avokoa ireo distrika 7 ao anatin’ny faritra Matsiatra ambony, ankoatry ny toerana hafa ivelan’ny diosezy toy ny any Kelilalina, Manakara, tapany atsimon’ny faritra Amoron’i Mania. Mivoatra ihany koa moa ny teknolojia ankehitiny ka afaka manjohy ity onjam-peo ity amin’ny alalan’ny facebook Radio Tsiry Fianara ny rehetra eto Madagasikara hatrany dilam-bato. Ny nisantarana io fanatsarana io ihany koa ny fampiainana ny olona ny fiainam-bavaka toy ny lamesa nandritry ny fihibohana noho ny valan’aretina Coronavirus ity. Amin’ireo fandaharana maro arosony ny mpihaino azy dia mikendry izany ho latsa-paka amin’ny fiainan’ny olona fa tsy mijanona ho resaka ambony latabatra fotsiny. Teny filamatra manentana azy moa ny hoe : « Radio Tsiry : mifagneva amin’ny hetahetanao ». Nandritry ny fankalazana io dia nisy ny fanontaniana araham-baliny ho an’ny mpihaina ka nahazoana fanomezana. Korana sy hetsika ara-kolontsaina nampiainana mivantana ary hanovana ny toe-tsain’ny olona no namaranana ny fankalazana tao Sahambavy io rehefa vita ny Sorona Masina.
Haino aman-jery : Hamehana ara-pahasalamana mitohy - il y a 4 jours
Challenge Airtel Mandresy : Fara gagne une Renault KWID flambant neuve - il y a 18 jours